केकीको कविता– ए पुरुष ! नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर हो - News Madhesh
केकीको कविता– ए पुरुष ! नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर हो
काठमाडौं,१९ भाद्र । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अभिनेत्रीमध्ये ‘प्रतिभाशाली नायिका’को पहिचान बनाउन सफल छिन् केकी अधिकारी। अभिनयमा जस्तै उनको ‘बौद्धिकता’ विचार, विमर्श र विभिन्न रचनामा पनि देखिन्छ।
फिल्मदेखि म्युजिक भिडियोमा देखिने केकीले आफ्नो ‘बौद्धिकता’ हालसालै आफ्नो एक कवितामार्फत पनि प्रस्तुत गरेकी छिन्। बुधबार उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत ‘ए पुरुष’ शीर्षकको कविता सार्वजनिक गरेकी छन्।
टिनको, खरको, कंक्रिटको, छानो भएको घरभन्दा अगाडि
मेरो कोख तिम्रो घर थियो
अहंकारले फुल्ने तिम्रो छातीमा पहिलो श्वास त्यहीँ भरेको हुँ।
क्रुर तिम्रा पञ्जाहरुको भाग्यरेखा त्यहीँ कोरेकी हुँ
तिमीले हेर्ने आँखा, तिमी उभिने मेरुदण्ड
र तिम्रा पुरुषार्थका प्रत्येक अंग त्यहीँ भित्र हुर्किएका हुन्
ए पुरुष !
म नारी हुँ!
नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर हो।
सार्वजनिक भएको कविताको पहिलो अंशमा केकीले भनेकी छिन्।
पार्श्व ध्वनिमा सारंगी र बासुरीको धुनमा कविता बाचन गरिरहेकी छिन् केकी। कविताको विषयवस्तुमा महिलामाथि पुरुषले गर्ने हिंसालाई लिएकी छिन्। कविता वाचनको दृश्यलाई पनि सोही अनुरुप उतारिएको छ।
निस्पट्ट अँध्यारोबीच सारंगी र बासुरीको धुनमा कविता वाचन गरिरहेकी केकीको नयाँ लुक्सले कविताको विषयवस्तुलाई पनि न्याय गरेको छ। ‘बोक्सीको घर’ फिल्मका लागि केकीले केही समयअघि कपाल काटेकी थिइन्।
उक्त कविताको भिडियो निर्देशन तथा सम्पादन श्रर्द्धा प्रसाईंले गरेकी छिन् भने सह–निर्देशन बिम्ब अधिकारीले गरेका छन्। रंग संयोजन माधव बेलबासेले गरेका छन्। भिडियोमा प्रमुख भूमिका खेलेको पार्श्व ध्वनिका लागि रत्न बिकले बासुरीमा साथ दिएका छन् भने सारंगीमा हेमन्त कान्छा रहेका छन्।
आफ्नो कवितामार्फत हिंसा, बलात्कारजस्ता महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध ‘आवाज’ उठाएकी छिन् केकीले। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कविताबारे जानकारी दिँदै उनले केही दिन अघि लेखेकी थिइन्, ‘अहिलेसम्म लडिरहनु भएका सबैप्रति समर्पित। माफ गर्नुहोला, हामी समाज, राष्ट्र र मान्छेकै रुपमा पनि असफल भइसक्यौं।’
केकी कविताको अन्त्य तिर भन्छिन्,
ए पुरुष शर्म गर
किनकी म तिम्रो पुरुषार्थलाई गिज्याइरहेछु।
प्रकशित मिति : 2021-09-04
संविधानमा संशोधन आवश्यक छः मेयर साह
महोत्तरीको जलेश्वर कारागारबाट १० कैदी रिहा